काठमाण्डौंको बल्खुमा श्रीमानले घनले श्रीमतीको लिए ज्या’ न, हाँसी हाँसी आएकी सन्तोषी बोरामा बन्द भइन् ! पुरा हेर्नुहोस् (भिडियो सहित ) – SUDUR MEDIA
March 18, 2021 AdminLeaveaComment on काठमाण्डौंको बल्खुमा श्रीमानले घनले श्रीमतीको लिए ज्या’ न, हाँसी हाँसी आएकी सन्तोषी बोरामा बन्द भइन् ! पुरा हेर्नुहोस् (भिडियो सहित )
काठमाडौं । भनिन्छ, मानिसको पहिचान उसको मनबाट गर्नुपर्दछ, तनबाट होइन । साथै उसको पहिचान कपडा हेरेर गर्न हुँदैन । संसारमा त्यस्ता धेरै मानिसहरु छन्, जो धनी भएपनि देखाउन चाहँदैनन् र सामान्यरुपमा नै हिँडिरहेका हुन्छन् ।त्यस्ता मानिसहरुलाई अधिकांशले भि’खारी सम्झिन्छन् र आफ्नो घमण्ड देखाउन थाल्छन् ।यस्तै एउटा घटना एक व्यक्तिको जीवनमा पनि घ’टेको छ । यो घटना थाइल्याण्का एक ठूला बिजनेशम्यानको हो ।
उनी एक करोडपति व्यक्ति थिए । तर उनलाई पुरानो कपडा मन पर्दथ्यो र उनी त्यहि कपडा लगाएर हार्ले डे’भिडसनको शोरुममा गएका थिए ।त्यहाँ गएर उनले नजिकै रहेको एक मोटरसाईकलको मूल्य सोधे ।तर पुरानो कपडा लगाएकै कारण बाइकको बारेमा सोरुममा रहेका व्यक्तिले बोल्न उचित ठा’नेनन् र बाहिर जान बताए । उनले नमानेपछि कर्मचारीहरुलेम्यानेजरलाई बोलाए ।म्यानेजरले पनि उनको कपडाबाट मूल्याङ्कन गरेर उनलाई बाहिर जा भन्दै चि’च्याउन थाले ।
जब ति व्यक्तिले उक्त बाइकको मूल्य सोधेर सबै पैसा र केहि टिप्स समेत झिके तब सबै छक्क परे उनलाई उक्त बाइकको १२ लाख मूल्य भनेकोमा उनले सबै निकालेपछि त्यहाँ रहेका सबै अचम्मित बने ।उनको बारेमा पछि सत्यता खोल्दै जाँदा उनी एक ठूला बिजनेशम्यान भएको कुरा पत्ता लागेको थियो । त्यसपछि त्यहाँ रहेका कर्मचारी र म्यानेजरले पनि उनीसँग मा’फी मागेका थिए ।एजेन्सीको सहयोगमा
यो पनिपढ़नु होस:जनकपुर– समाजमा मान्छेका अनेक सौख हुन्छन् । कहिलेकाहिँ त्यही सौख उनीहरुको पहिचान वन्ने गर्छ ।त्यस्तै सौ’ख भएका ब्यक्ति हुन्– जनकपुर उपमहानगरपालिका–१७, कनकपट्टीका दिनेशसिंह यादव ।स्थानीय सरस्वती माध्यमिक विद्यालयमा लेखापाल रहेका यादवको नङ पाल्ने सौख छ। र लामो नङ पालेरै उनी आफनो पहिचान वनाउन चाहान्छन् ।लामा नङ पाल्नेमा आफू नेपालमै पहिलो व्यक्ति भएको उनको दावी छ। हातका औलाको नङ ४० इन्चसम्मको भइसकेको उनी वताउँछन् ।वाहिर जाँदा नङ हेर्न र फोटो खिच्नका लागि मानिसहरुको होडवाजी चल्ने गरेको उनको अनुभव छ।
विदेशमा काम गर्ने केही कनकपट्टीवासीले उनको नङका बारेमा प्रचारप्रसार पनि गर्ने गरेका छन् । जसका कारण युएसए र जापानवासीले नङको संरक्षणकै लागि भनेर आर्थिक सहयोग गर्ने गरेका छन् ।युएसए र जापानवासीले मासिक १५ हजार रकम सहयोग गरिरहेको उनले वताए । त्यसवेला गर्व महसुस हुने गरेको उनले वताए । नङ पाल्दा उनलाई खुसीसँगै पी’डा पनि हुने गरेको छ ।विशेष गरेर जाडो महिनामा नङकै कारण सुत्न स’मस्या हुने गरेको उनले बताए। सुत्दा नङ न’भाचियोस भनेर जोगाएर सुत्नु पर्ने भएकाले स’मस्या हुने गरेको उनको भनाई छ ।
थप भिडियो हेर्नको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोलाः